Emva kwe- Rocket Lake, izinto ezi-5 ekufuneka zenziwe yi-Intel kwidesktop ukubuyisa umlingo wayo we-CPU
emva kwe- "Rocket Lake", izinto ezi-5 ekufuneka zenziwe yi-Intel kwidesktop ukubuyisa umlingo wayo we-CPU
Asifuni ukutshisa ishishini xa liphantsi, emva koko Siza kweqa isingeniso esifanayo osifundileyo amatyeli aliqela kule minyaka imbalwa idlulileyo: i-AMD kunye ne-Ryzen lineup loop yayo ejikeleze i-Intel kunye ne-Desktop CPU Core
yayo. Kwaye i-Intel iyaqhubeka nokuzidubula kwi-sneaker, kanye xa ucinga ukuba inokuba kungokubuyela elugqatsweni.
Ukuphehlelelwa kweprosesa yenkampani yamva nje, i-11th gen "Rocket Lake" Core uthotho, ibingumbandela wokugxekwa ubukhulu becala ( eyethu phakathi kwabo
). Ngexesha apho i-Intel yayifuna ukuyisusa i-Empire State Building, isipili saqhekeka kwaye wonke umntu wabona ngamehlo.
Ke ngoku ukuba uthuli oluqaliswe kwiL Rocket Lake luzinzile, kwaye isigwebo siyaqina kwi-11th gen kernel, yintoni enokwenziwa yi-Intel ukuze ihlale kugqatso?Iiprosesa zedesktop, ngoxinzelelo olwandayo oluvela macala onke? I-AMD isekhona kwaye izinze ngokuqinileyo kubuchwephesha be-nanometer ye-7 kunye neRyzen. Kwaye kukho into ye-X X ye-Apple kunye nomgca wayo we-M1 weeprosesa eziye zafunyanwa kwiilaptops ukuza kuthi ga ngoku. I-Intel kufuneka isebenze, kwaye kungekudala. Akukho nto yenzekayo ngokukhawuleza, khumbula wena, kwi-CPU yeHlabathi; ukubheja kwezobuchwephesha okubekwa ngabenzi beetshipsi okanye ukuwa ngaphezulu kweminyaka. Kodwa nantsi isicwangciso somsebenzi kwilizwe elifanelekileyo.
1. Phuma kwi-14nm
Masiqale ngezinto ezicacileyo: I-Intel, sukuhlaziya i-11th gen okanye uzame ukuyokuthenga i-tech 14nm. I-10th Gen "IComet Lake Refresh" ibhengezwe ecaleni kweRocket Lake kukuphakama kancinci kwisiphelo esisezantsi se-10th Gen Pentium kunye neCore i3 chips, ejolise ukomeleza inkqubo yohlahlo-lwabiwo mali lwe-Intel. Akukho zixhobo zintsha zokwenyaniIsiphelo esisezantsi kwidike lerokhethi f amily.
Ukubona indlela iComet Lake Refresh eyilinge lokugcina kunye nelona candelo likhulu kwimakethi yenkqubo ye-desktop (phakathi kwinqanaba kunye neeprosesa ezisezantsi), masithembe ukuba inkampani ayindim ungajonganga "ukuvuselela" iimodeli ezinje ngeCore i5-11600K xa isizukulwana se-12th senkqubela ye-10nm iprosesa yochungechunge "iAlder Lake" ikhutshwa ngaxesha lithile kulo nyaka.
Sekuyiminyaka esixhenxe okoko i-Intel yaqala ukuvelisa iiprosesa ngokusekwe kwi-14nm lithography yayo, kwaye lixesha lokuhamba ivuliwe, zombini zivela kwitekhnoloji, intengiso kunye nembono yobunjineli. Ukuphehlelelwa kwe
kubonisa ukuba iinjineli zeIntel zithathe inkqubo malunga nokufikelela ngokufanelekileyo, nditsho ne-10nm yayo "Ice Lake" cores ezazibuyiselwe kwinkqubo ye-14nm. Isidingo sokwenzaUkutshintsha umgca we-10th Gen's flagship 10-core chip ukuya kwisibhozo nje ngoku luphawu lokuba imida ifikelelwe. Ngethamsanqa, kujongeka ngathi i-Intel izinikele ngokupheleleyo kwimephu yendlela yokukhupha zonke iiprosesa zexesha elizayo kuyilo lwayo lwe-10nm. Umphathi omkhulu we-CEO uPat Gelsinger kutshanje unike isishwankathelo se-
$ 20 yezigidi zeeplani zokwakha iifektri ezintsha ze-7nm
kwiziko lenkampani laseArizona.
(umfanekiso weCred it: Intel)
Intel yayiza kwakha iichips ngexesha yemisebenzi yayo kunye neyabanye abathengi, eyinxalenye yento eyibiza ngokuba yi "Intel Foundry Services" uthungelwano lwezixhobo zokuvelisa kunye nobambiswano olunokubakho kwimizi-mveliso yangaphandle enje ngeTaiwan Semiconductor Inkampani yezeMveliso (TSMC). Sisicwangciso esinokuthi, ukuba sinenzuzo ngokwaneleyo, sinike i-Intel isiseko esifunayo ukuze iphinde izinzile.beka imephu yendlela ebonisa indawo enokhuphiswano ngakumbi ne-AMD kwiiprosesa zedesktop, kwiindawo ezinje nge-lithography, uyilo, itekhnoloji, imveliso kunye neenkqubo. .
2. Ukuphinda ubuye usimende wePC-wokuDlala ubukhulu
I-Intel ibonakalisile, nangokuphehlelelwa kweRocket Rock, ukuba kulungile ukwenza into enye- ukubala okuhlanganisiweyo. Ngaphandle kwetyala lobuchwephesha le-14nm libotshelelwe kwizikhonkwane zalo, i-Intel khange ibenangxaki ekufezekiseni amaqondo aphezulu esakhelo kwimidlalo phakathi kwebanga eliphakathi kunye nokunikezelwa okuphezulu kule minyaka imbalwa idlulileyo., Abaqhubekekisi banxulunyaniswa nenkqubo yediski.
I-Ryz fr 9 5900X ) ibetha iprosesa ye-Intel Core i9-11900K kwimidlalo emininzi ethandwayo. Ngumdlalo omele ukuba ube nzima ngenani lamakhonkco ongezelelweyo.
I-AMD icokise uyilo lwayo lweZen yaba ngumkhonto ocoliweyo, onokuthi ubethe nakweyiphi na indawo ethambileyo evela kwi-Intel, apngokucacileyo ngesicelo.
I-Intel Core i5-11600K
, yeeprosesa ezimbini phakathi kwe-11th Gen Rocket Lake lineup esiyijongileyo ukuza kuthi ga ngoku, yeyona nto ibalaseleyo ye-Intel yokugcina ukufaneleka kwincoko yomdlalo ngoku. isikhundla sobunkokeli. I-Intel Alder Lake kuya kufuneka yenze konke okusemandleni ayo ukuze ibuyise kwakhona i-AMD ekhokelayo isoyikisile kwimidlalo ye-desktop. Kwaye kude kube sazi ngakumbi malunga ne-12th Gen Intel okanye i-AMD Zen 4, asinakuqiniseka ngokuqinisekileyo ukuba eli dabi liza kuqhuma njani. Impendulo ye-Intel ilindeleke kamva kulo nyaka; asiqinisekanga malunga nee-AMD.
Okwangoku, nangona kunjalo, kuyacaca: I-AMD yeRyzen 5000 ngoku ilinganayo okanye ilunge ngakumbi kubadlali abenza uhlahlo-lwabiwo mali, ubushushu, okanye amandla. Kwaye, uyazi, amaqondo aphezulu esakhelo nawo!
3. Nceda unamathele kwisokethi esinye okwethutyana.ixesha
Indawo enkulu apho ixabiso lesindululo se-processor ye-AMD xa kuthelekiswa neprosesa ye-Intel ayicacanga ncam yile nto yaziwa ngokuba "lixabiso lokwamkelwa". , inokuba yiyo nayiphi na into xa ufuna ukuphucula ukubonelelwa ngamandla kwePC yakho ukulungiselela iprosesa elambele amandla ngakumbi, ukuthenga ibhodi yomama entsha ukugcina i-chipset ehlaziyiweyo kunye nesokethi yenkqubo entsha.
I-AMD ikhuphe iiprosesa ezintsha zeRyzen phantsi koyilo lweZen rhoqo kwisithuba esingaphezulu kweminyaka emine ngoku. Kwaye unokufumana iiprosesa zangoku zokuvelisa ezinje ngeRyzen 9 5900X, ekhutshwe ngo-2020, enokuthi, ngemodeli yekhadi elungileyo kunye nohlaziyo olufanelekileyo lweBIOS, isebenze ngobuchwephe kwi-B350 motherboard ekhutshwe ngo-2017.
Ngoku akukho siqinisekiso. Imeko inzima ngakumbi
phakathi kwabavelisi bebhodi yomama eyahlukeneyo kunyekuxhomekeke kwiprosesa ngqo yeRyzen ofuna ukuyisebenzisa. Kodwa xa iyonke, i-AMD's Socket AM4 ibonelela ngenqanaba lokungqinelana okungasemva kweetshipsi kunye neziseko apho i-Intel ingazabalazeli nje kuphela ukufana, kodwa ihlala ibonakala ngathi iyila ngokuchasene nayo.
Iziseko ezibini zesiseko se-cadence ayisiyonto intsha ye-Intel, khumbula. Kule minyaka mine i-AMD ikhuphe i-AM4-processor ehambelana ne-desktop, i-Intel yangena kwiziseko ezimbini, esinye isokethi esitsha (i-LGA 1700)
IAlder Lake icwangciselwe ukukhutshwa kamva kulo nyaka.
. Indlela ye-Intel yenze umbono weqonga le-boardboard yomama elingenakulinganiswa, ngelixa i-AMD isenza konke okusemandleni ayo ukuzisa abathengi nabadala nabadala kwihlabathi kangangoko kunokwenzeka.
I-AMD ibonakalisile ukuba nezona processor zakutshanje zobuchwephesha zinokuxhaswa okwethutyana cImigca yoomama abadala kakhulu, ukuba kukho umyolelo wobugcisa kunye nesivumelwano phakathi kwamaqabane ekhadi. Ke ukuba i-Intel iya kuhlala ikhuphisana ngokweendleko zokwamkelwa, kufuneka ifumane indlela yokwaphula umdaniso osisiseko ngamanyathelo amabini ... kwaye ngokukhawuleza.
4. Fumana imizobo edityanisiweyo kwimigangatho ye-AMD
Njengoko besitshilo apha ngasentla, imakethi yenkqubo ye-desktop esezantsi ukuya kwezantsi ibonisa isabelo sengonyama kwintengiso ye-chip chip . Kwaye sandwich zininzi iiprosesa ezinemizobo ehlanganisiweyo. Kude kube kutshanje, ibilawulwa ziiprosesa zeIntel ngokudityaniswa kwayo kwesilicon UHD Graphics poky kunye nokusetyenziswa (ihlala i-UHD 630 okanye i-600). Sibabiza ngokuba ngabaprosesa bemizobo edityanisiweyo (IGPs). Abathengi abaninzi bohlahlo-lwabiwo mali bababiza ekhaya.
Ezi ntlobo zeeprosesa zithandwa kakhulu kwimakethi yomakhi we-OEM / yenkquboIiPCs ezinesabelo-mali esisezantsi kuba zisenza ukuba kube lula ukufumana ii-PC ezisebenza ngokusezantsi (zomsebenzi weofisi, ngesiqhelo) emhlabeni. Kwaye i-IGP elungileyo, ngequbuliso, ibaluleke kakhulu apha ngo-2021 ngamaxabiso anyukayo amakhadi emizobo. Nangona kunjalo, uninzi lwabadlali bePC badlala kuhlahlo-lwabiwo mali oluqinileyo, kwaye ngamanye amaxesha iprosesa ye-Intel ene-UHD Graphics IGP okanye i-chip ye-AMD kunye nomlingane wayo weRadeon yenza umahluko phakathi kokuba nePC yedesktop onokuthi udlale kuyo okanye ungabinayo kwaphela.
Masibuyele kwenye igrafu, ukusuka kuvavanyo lwe-Rocket Lake chip, apha kwi-IGP kwi-Core i5-11600K. Kweli candelo lentengiso, inkwenkwezi
iRyzen 5 3400G
ilawula umbulelo omkhulu kukudityaniswa kwayo kweRadeon RX Vega 11 IGP ... Njengoko ubona kwiithebhu zegrafu apha ngasentla, Intel ngokucacileyo wenze inkqubela phambili ekuphuculeni i-chip yakhe. imizobo yoyilo. Uluhlu lweLake Rocket lolokuqala kwidesktop ukudibanisa imifanekiso emitsha ye-Intel Iris Xe. Ikwimo ye-UHD entsha yemizobo, i-UHD 750, kwiimeko ezininzi. (U-Iris Xe uqalile ukubonakalisa i-11th isizukulwane se "Tiger Lake" seeprosesa ezishukumayo zeelaptops, kwaye yayisisityhilelo apho.) Amanqaku amaninzi kunye neziphumo zereyithi yeziphumo ezirekhodwe ngexesha leemvavanyo zethu ze-Intel Cor IGP i5-11600K (kunye ne-chip ene-new Iris Xe UHD Graphics 750 IGP) ziphindwe kabini ezo zesizukulwana esidlulileyo.
Esi sisivumelwano esikhulu se-Intel, njengoko uninzi lweetshipsi ze-Ryzen line chips zingenayo i-IGP kwaye zifuna ikhadi levidiyo ukuba lisebenze. (Kwaye, khange sitsho, amakhadi evidiyo ayabiza kwezi ntsuku?) Ukunyusa intsebenzo ye-IGP sisiqalo esihle, kodwa iseliphandle xa kuthelekiswa ne-Ryzen IGP ye-AMD kwi Ryzen 5 3400G , esungulwe ... umva Ngo-2019.
I-AMD inenye yezi IGP ezixhotyiswe ngeetshipsi kwi ssipaji. (Babizwa ngokuba yi-G-Series, enye i
iRyzen 3 3200G
.) Banikezela ngexabiso elikhulu kubathengi bemali abafuna ukudlala imidlalo kwi-IGP, kwaye ngelixa kunzima ukufumana ngoku amaxabiso asondele kuluhlu lwamaxabiso ($ 149 kunye ne- $ 99 ngexesha lokukhululwa), abayi-brainer kubadlali beendleko ezingabizi. Ukongeza, silindele ukuvuselelwa kweRyzen 5000 kwezi chips ze-G ngo-2021. Zigqithile. Kwaye xa enkqonkqoza, jonga uIris Xe.
5. Sukukhupha enye iCore i9-11900K
Sikholelwa ukuba iRocket Rock Core i9 iflegi inokubona uhlengahlengiso lwamaxabiso ixesha elide. Kushushu kakhulu kwaye kuyabiza kakhulu ukuba kuyintoni. Ngaphezu koko, kwakunzima ukuvavanya.
Ababuyekezi abaninzi kwiwebhu, kubandakanya nam, bakufumene kunzima ukwazisa oku. Ukuqiniseka, i-AMD ayingowasemzini kwi-BIOS okanye kwimicimbi yokukhutshwa kwangaphambili (te zombini kwiiprosesa zayo
), kodwa ngabaphi abavavanyi bebhentshi ekuye kwafuneka bajongane neli xesha elijikelezayo basigcina silindile ... iAlder Lake. Isigqibo sethu sokugqibela kwi-Intel Inkqubo yeflegi yeflegi yangoku ke yayixhomeke kwimicimbi embalwa yokuvavanya. Kodwa ngosuku okanye ezimbini emva kokulandela ukukhutshwa kwayo, imvumelwano kwijenali-o-sphere ikwi: Le ayisiyiyo eyure ye-silicon ye-Intel.
Kuyinto engaqhelekanga kumenzi weprosesa yedesktop ukuba siyazingca ngokubanzi ngozinzo. Ukongeza, inkampani ibeke ixabiso kwiCore i9-11900K, iprosesa engundoqo esibhozo, ngaphezulu kwedokodo layo, kwaye kuwo onke amathuba okujongela phantsi i-AMD, iye kwelinye icala yaza yahlawula ngaphezulu i-CPU. ngee-cores ezimbini ezimbalwa kunaleyo eyandulelayo ngexabiso eliphezulu. Siyazi ukuba ukuveliswa kwesilicon yintsimbi yebhotilee kule mihla kwaye amaxabiso aphezulu, kodwa isiseko sokuhla kwamandla emali kunye namaxabiso kwichip enye? Yiya!
I-Intel ibikwindawo enqamlezileyo iminyaka eliqela ngoku ngaphezulu kokuxhalaba ngenxa yokuphulukana nobunkokeli bayo kwii-PC zedesktop, kunye ne-AMD egqithe inkampani kwiidesktops ukuya kumaxabiso aphezulu. I-Core i9-11900K yomeleza kuphela umbono kwiingqondo zabadlala umdlalo kunye nabadali bemixholo yokuba i-Intel isengozini ngakumbi kunangaphambili kuhlaselo lwesicwangciso se-AMD.
I-adventure yenkampani elandelayo kwiiprosesa zedesktop
iya kuba se-10nm
, esele siyibeka emva kwe-AMD kwiloggraphy ngaphambi kokuba i-12th gen kernel ihambe. Into enokuthi ifuneke ukuyenza kukuqonda esi sikhundla, ngokuhambelana nemarike, kunye nokwehlisa amaxabiso ngokufanelekileyo. Ukuba inkampani iyazi ukuba iAlder Lake ayinakubanakho ukutshatisa neAI-MD ipheke iZen 4, ukudlala umdlalo wexabiso okwexeshana kunokuba yindlela yokuhamba. Amanye amalungu e-Intel asengamaqela emigulukudu, ngapha koko.
Amarhe okuqala acebisa ukuba iZen 4 iya kusekelwa kwi-TSMC's 5nm lithography kunye nombala wayo wokuphehlelela ekuqaleni kuka-2022, inika iAlder Lake iwindow encinci ye-Intel yokuqinisa indawo yayo yokulwa ngo-2021 nangaphaya.
I-Intel inendlela ende (ikhadi) ngaphambili ukuba i-Intel ayenzi le nto ngeli xesha, ayixabisi ngokufanelekileyo i-chipbank yayo, inokubangela Ukulibaziseka okukhulu kwenkampani xa kuthelekiswa nento esele ikho ngoku kusungulwa.
Ngoku kuyinyani ukuba intetho yentetho yenkampani yakutshanje kwi-Intanethi kunye ne-CEO yayo entsha yayothusile, inkampani ivuma ngokuphandle ukuba isemva kwexesha, ngelixa ibonakalisa ngocoselelo imephu yayo. yendlelauyabuya. Kodwa, ukuba nayiphi na inkampani ngumntwana webinzana elithi "iimephu zendlela kwenzelwe ukuba zaphulwe," kule minyaka idlulileyo, yi-Intel. Ngaba inkqubela phambili ye-Intel ekwakheni iziseko ezitsha okanye (nangaphambi kokuba isamente yomile kubo) utshintsho oluya kwi-10nm lwanele ukubuyisela i-AMD kwindawo yayo engaphandle? -Zen? Lixesha kuphela eliza kuxela. Uluvo lwethu kukuba iLake yeRocket yayinguhlobo lokugcwalisa, ukugcina ixesha lokuhamba okulandelayo. Ngeli xesha ngo-2022, kuya kufuneka sazi ukuba ngaba yayiyinyani eqhubayo kwibhodi yechess, okanye kukuhamba nje komda wenqaba.
I-amd ryzen 9 3900x vs Intel Core i9-9900k: yeyiphi iprosesa ephezulu yokuthenga?
2021-04-18 22:26:18 | Iiprosesa
Ngokufika kweeprosesa zokuqala zeRyzen 9 kwi2019, i-AMD ibandisile amandla ayo okukhuphisana nokusebenza kwe-Intel ekhuphisanayo yeCore i7 kunye neCore i9 chips. Ukuba ujonge ukusebenza okuphezulu, iprosesa ephambili yedesktop, iRyzen 9 kunye neCore i9 zombini zizinto ezinokunyanzelwa. Kwi-2021, i-g...
Intoni? I-amd's ryzen 5600x ngoku ixabisa i-369 yeedola?
2021-04-18 15:38:12 | Iiprosesa
(Ityala: IZiko leMicro) Ngesizathu esithile, umthengisi we-elektroniki iZiko leMicro ufuna ukuba uhlawule ngaphezulu ukuba ube neprosesa ye-AMD yeRyzen 5600X. Abakhi bePC baqaphele ngoLwesibini ukuba iZiko leMicro lithengisa iprosesa edumileyo yeedola ezingama-369, ukonyuka okubonakalayo kwintengiso...
Sizama ukuphazamisa umsebenzi wase-China kwikhompyuter ye-exascale ngokuthintela ukuthunyelwa kwelinye ilizwe
2021-04-11 08:17:32 | Iiprosesa
(Ifoto ngu-Yang Bo / i-China News Service nge-Getty Izithombe) Urhulumente wase-US uphakamisa izithintelo ukuthintela i-China ekwakheni ikhomputha yayo "exascale. " NgoLwesine, iSebe lezoRhwebo lase-US lanyanzelisa ulawulo lwangaphandle kumazwe amane e-China ahambelana Ukuphuculwa kweenkqubo ze-exas...
Uvavanyo lweprosesa ye-Intel Core i5-11600k
2021-04-03 06:57:30 | Iiprosesa
I-core-6/12-thread Core i5-11600K ($ 262) izisa uzinzo kuphehlelelo lwe-Intel's 11th generation ("Rocket Lake" line) yeeprosesa zedesktop. Umqondiso wokuqala weRocket Rock yokuqalisa ngokusingisa yayikukuthengisa ngaphambi kwexesha kunye nokuvavanywa kwangoko kwento ye-Core i7-11700K chip kwiiveki e...
Uvavanyo lweprosesa ye-Intel Core i9-11900k
2021-04-03 06:54:25 | Iiprosesa
Ngaba iprosesa yedesktop entsha ye- $ 539 Intel Core i9-11900K yenziwa nge-silicon? Ewe kunjalo, kunjalo. Ngaba oko kuthetha ukuba, ngokwandiswa apha kwi-2021, kunokuba nzima ukufumana kwixabiso elicetyiswayo le-Intel? Inokwenzeka kakhulu. Imfuno yezixhobo zecandelo eliphezulu ibhaka kakhulu kwezi n...
Iiprosesa: Iiprosesa zeRocket Rock zazikhanyiswe ziluhlaza ngaphambi kokhuphiswano kunye ne-amd zaba namandla kakhulu
2021-04-02 01:41:10 | Iiprosesa
Ukuba uzibuza ukuba kutheni iiprosesa ze-Rocket Lake ezingabangeli umdla zikhona, yazi ukuba inkampani yavula iprosesa kwiminyaka emibini eyadlulayo xa umenzi weetshiphu ejongene nokhuphiswano oluncinci oluvela kwi-AMD eyimbangi. , I-Intel iveze ukuba iqale ukusebenza ngokusesikweni kwiiprosesa zayo...
I-ARM iveza uyilo lwayo lweArmv9 kunye nemephu yendlela
2021-03-31 14:44:21 | Iiprosesa
Ukusuka kwiipasipoti zokugonya ukuya kwiirekhodi zonyango zedijithali, iinkqubo zedrone yokukhangela kunye neetekhnoloji zokubuyela kwindawo ekhuselekileyo emsebenzini: USimon Segars, umphathi we-ARM, wazisa amatyala okusetyenziswa kwenkampani yokuqala yoyilo lwe-IT kwiminyaka eli-10, iArmv9. Kumsit...
Amaxabiso eprosesa e-Intel Rocket Lake kusenokwenzeka ukuba avuza: isiseko i9-11900k esidweliswe kwi- $ 599
2021-03-29 04:55:57 | Iiprosesa
Umthengisi wePC eMilwaukee, eWisconsin usenokuba uxele amaxabiso eprosesa ye-11th Gen Intel Core "Rocket Lake" ngaphambi kwenyanga ezayo. iwebhusayithi, eqatshelwe ngumsebenzisi we-Twitter "@ harukaze5719" ngolwesiHlanu. Njengoko ubona, eyona processor inamandla kusapho, i-Intel Core i9- 11900K, ide...
Uyikhetha njani iprosesa yelaptop ngo-2021
2021-03-25 19:43:13 | Iiprosesa
Kwintliziyo yelaptop nganye yindawo ekuqhubekeka kuyo (CPU) ejongene nayo yonke into eyenzeka ngaphakathi. Iiprosesa (ezibizwa ngokuba "ziiprosesa") ozibona kwiiLaptops zenziwe yi-AMD, Apple, Intel, kunye neQualcomm. Izinketho zinokubonakala zingenasiphelo, kwaye amagama abo, yiByzantine. Kodwa ukuk...
I-Intel's 7nm PC chip iya kufika ngo-2023 isebenzisa ubuchwepheshe be-tsmc
2021-03-25 04:48:23 | Iiprosesa
(Ityala: Intel) I-Intel yokuqala ye-7-nanometer ye-PC ye-PC iza kwi-2023, kwaye xa isenzeka, iprosesa ayizukuba yindalo ye-Intel kuphela. Endaweni yoko, inkampani ithi izakucofa imveliso evela kwi-TSMC, isiseko esisemva kwembangi ye-AMD, ukuvelisa ubuncinci bezinto ze-chip. Ngolwesibini, umphathi om...
Iprosesa ye-Intel 'Alder Lake' yokuxhasa ipcie 5.0, ddr5 ram
2021-03-23 02:17:11 | Iiprosesa
(Ityala: Intel) Iiprosesa ze-Intel ze- “Rocket Lake” ziya kuphehlelela ngokusesikweni kwiveki ezayo. Kodwa okwangoku, kubonakala ukuba iinkcukacha zendlela elandelayo yenkampani ye-chip, "iAlder Lake, " iVideoCardz ifumene izilayidi ezisemthethweni zentetho ye-Intel e-Alder Lake, eziza kubandakanya ...
Amaxabiso eprosesa e-Intel Rocket Lake kusenokwenzeka ukuba avuza: isiseko i9-11900k kuluhlu lweedola ezingama-599
2021-03-20 00:50:06 | Iiprosesa
Umthengisi wePC eMilwaukee, eWisconsin usenokuba uxele amaxabiso eprosesa ye-11th Gen Intel Core "Rocket Lake" ngaphambi kwenkqubo ezayo yenyanga ezayo. iwebhusayithi, eqatshelwe ngumsebenzisi we-Twitter "@ harukaze5719" ngolwesiHlanu. Njengoko ubona, eyona processor inamandla kusapho, i-Intel Core ...
Ayisekho i-mac: i-justin imisele emide yeapile yeewindows pc kwizibhengezo ezintsha ze-intel
2021-03-18 01:20:55 | Iiprosesa
(Ityala: Intel) UJustin Long, umdlali weqonga oboniswe kwintengiso ka-Apple 'Fumana iMac', utshintsha amacala kwaye ajoyine i-Intel ekukhuthazeni iiWindows PCs NgoLwesithathu, i-Intel ikhuphe iintengiso zevidiyo ezintlanu ezibandakanya izibonelelo ezide zokukhuthaza iiWindows PCs ngelixa bebetha Ink...
Abathengisi baphakamise amaxabiso ama-Pre-Order ama-Intel's Rocket Lake Processors
2021-03-17 04:40:35 | Iiprosesa
I-odolo zangaphambili zeprosesa ye-Intel "Rocket Lake" yexesha elizayo ziqala namhlanje, kwaye ukuba ucwangcisa ukuthenga, zilungiselele amaxabiso athe xhaxhe. Iinkcukacha eziphakanyisiweyo zeprosesa, ezenza ukuba zibize kakhulu kunee-processor ze-AMD ezikhuphisanayo ze-Ryzen 5000. Umzekelo, iproses...
I-Intel's rocket lake cpus iya kuzama ukubetha i-AMD ngamaxabiso asezantsi
2021-03-16 16:28:09 | Iiprosesa
Xa iprosesa ye-Intel's "Rocket Lake" ye-Intel ifika, bazakubetha iiprosesa ezikhuphisanayo ze-AMD kwindawo enye enkulu: ixabiso. I-Intel ekugqibeleni ilahla iinkcukacha zomgca wayo opheleleyo weeprosesa zeCore. Isizukulwana se-11, kubandakanya isantya seewotshi zabo, inani lamanani, kunye neendleko....